Tahriibayaal Dooniyi kula qalibantay Xeebaha Dalka Yeman | maakhir.com
Tahriibayaal Dooniyi kula qalibantay Xeebaha Dalka Yeman
Sanca:- Wararka haatan naga soo gaadhaya magaalada Sanca ee Xarunta Dalka Yeman ayaa waxay sheegayaan inay dooni macmali ahi ay shalay galinkii danbe kula qalibantay Xeebaha Dalka Yeman,waliba meesha lagu magcaabo xawaar ee ka Tirsan Gobok Ebyan, waxa la soo tabinayaa inay ku dhinteen ilaa dad gaadhaya 20-Ruux.
Doonidan ayaa waxa saarnaan dad isugu jira Somaliya iyo Itoobiyaan kuwaasi oo qoyaastii lagu sheegay inay gaadhayeen ilaa 120-Ruux halka 90-ka mid ah dadkaasi ay ahayeen Itoobiya 30-kalena waxa la cadeeyay inay ahaayeen Somaliya, waxayna doonitaasi la qalibantay goortii ay Xumaatay oo cilad xaga matoorka ahi soo gaadhay.
Dadka la soo badbaadiyay ayaa waxay u badanyihiin Haween iyo caruur kuwaasi oo la ildaran Xaalada Caafimaad waxana haadan lagu dabiibayaan Goob Caafimaad oo maamushu Hay”adda UNCHR- ee qaabilsan arimaha Qaxootiga.
Xuseen Xaaji Axmed oo ka mid Masuuliyiinta Safaarada Somaliya ee Dalka Yeman ayaa warbaahinta la hadlay waxana uu sheegay inay dadkaasi qaar la soo samata bixiyay walina ay wadaan Booliska Dalkaasi baadhitaano xoogan oo ku waasi oo lagu baadi goobay bal in la ogaaado inay jiraan wax Nool oo wali Salka Bada Jiifa.
Masuulkaasi waxa ka loo uu sheegay inuu shilkaasi dhacay Shalay galinkii danbe xili ay Dabaylo xoogani dhacayeen waxana uu Cadeeyay inay doontaasi ay Dabaylaha u sii dhiiraayeen Cilada Xaga Matoorka ah oo soo gaadhay.
Dadka badankooda ayaa markoodii hore ka booqlay Xeebaha Magaalada Bosaaso iyaga la sheegay inay doon ka raaceen Duleedka Magaalada Bosaaso halka lagu magcaabo Shinbraale.
Maamulka Puntland ayaa dhawor Jeer u tafa xaytay inuu arintaasi wax ka qabanayo balse waa uu Ku guula daraystay isaga oo xakamayn kari waayay.
« France iyo Emaradka Carbta oo kala saxeexday Nuclear
Midawga Afrika oo Lixbilood ku daray sii joogitaanka Ciidamada Amissom ee dalka Somaliya »